‘‘Food Fight Write Blogger ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲ’’ | Wutyee Food House
‘‘Food Fight Write Blogger ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲ’’
အမေရိကန်နိုင်ငံ Florida တွင် ကျင်းပမည့် World Food Championship – Food Fight Write Blogger ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲ သို့ ၀တ်ရည် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အကြောင်းလေး ချစ်ညီအစ်မ၊ ညီအစ်ကို အားလုံးကို သတင်းကောင်းလေးပါး ချင်လို့ပါ။
Food Fight Write Blogger ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၃၊ ၄ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီ ၄ရက်နေ့မှာ ဟင်းချက် ဘလောက်ဂါ အယောက် ၅၀က နောက်ဆုံး ဟင်းချက်ပြိုင်ဆိုင်ရမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားများ ဖြစ်ပြီ မြန်မာပြည်မှ ၀တ်ရည် တစ်ဦးတည်း ပါဝင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာက ဟင်းချက်ဘလောက်ဂါတွေရဲ့ ဟင်းချက်စွမ်းရည်၊ ဟင်းတပွဲကို စားချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်မှု၊ အရသာပေါ်မူတည်ပြီ ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရဖို့ထက်ဆိုင်ရင် inspiration နဲ့ အတွေ့အကြုံရအောင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆုရအောင်လည်း ဆုတောင်းပေးကြပါအုန်းနော် ချစ်ညီအစ်မ၊ ညီအစ်ကိုတို့.. <3 <3
Food Fight Write Blogger Summit ပြိုင်ပွဲကို World Food Championship အကြို ဟင်းချက်ဘလောက်များ အတွက်သာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ World Food Championship ပြိုင်စဉ်အနေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ဟင်းချက်စာဖိုမှူးများ၊ ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်များမှ World Barbecue Championship, World Open Chilli Championship, World Burger Championship, World Dessert Championship, World Sandwich Championship, Bacon World Championship, World Recipe Championship, World Pasta Championship, World Seafood Championship, World Chef Challenge ပွဲစဉ်များကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀တ်ရည် Food Fight Write Blogger ပြိုင်ပွဲ ပြီဆုံးလျှင် World Food Championship တခြားပွဲစဉ်များကိုလည်း ဆက်လက်ပြီ လေ့လာခွင့် ရအုန်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချိုဝတ်ရည် (Wutyee Food House)
Category: features |
Myo Tun says:
Which you to success!
Thanksalot bro 😀 😀
Moe Moe San says:
Great to hear your success !
I hope I will get good news for Myanmar.
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် sis. ၀တ်ရည် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားပါ့မယ် <3 <3
wish you to success
ဆုတွေဆွတ်ခူးပြီးပြန်လာပါ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဝတ်ရည်ကိုကံကောင်းမှုတွေက ကြိုနေမှာပါ
ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် sis <3 <3
Hnin Ei Htun says:
Many Thanks par sis <3 <3
Congratulations Wutyee, Fighting….
Thanksalot sis <3 <3
congratulations အောင်မြင်ပါစေ မမ
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် sis 😀 😀
Su Pyae says:
မြန်မာပြည်အတွက် တတ်စွမ်းသမျှ လက်စွမ်းတွေ ပြလိုက်ပါနော်
ဟုတ်ကဲ့ sis.. ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် sis ^_^ ^_^
Proud of you sis. Wutyee representing Myanmar! Wish you tons of success in this Food Fight Write Blogger Competition! Glad to know you also get to participate in studying the various events of the World Food Championship Competition as well.
Many many Thanks <3 <3
Hla Thaung says:
Congratulation Wutyee, Anxiously and hopefully waiting for your success news. Good Luck.
YOU can do it. GREAT Job!
Wut hmone says:
Congratulation, try ur best
Congratulation ပါမဝတ်​ရည်​ ​ဆု​တောင်း​နေပါ့မယ်​
Congratulation ပါညီမလေးရေ အောင်မြင်မှာပါ ….
Congrats sis. happy for u ?
Congrats sis! Happy for u 🙂